Anti-Racist Policy of General Aung San | Dr Ko Ko Gyi's Blog
၁၉၄၇ ခုနှဈ၊ မလေတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအခွခေံဥပဒေ ရေးဆှဲရေးအတှကျ ဖဆပလ ပဏာမပွငျဆငျမှုညီလာခံကို ကငျြးပခဲ့ပါသညျ။ ထိုညီလာခံတှငျ ဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးသညျ့ ဒီးဒုတျ ဦးဘခြို က လှတျလပျရေးရသညျ့အခါတှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာကို နိုငျငံတျောဘာသာအဖွဈ ပွဋ်ဌာနျးရနျ သငျ့ ကွောငျး အဆိုတငျသှငျးသညျ။
ဤအဆိုနှငျ့ပတျသကျ၍ ဆှေးနှေးကွသညျ့အခါ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက ဦးဘခြိုကို အောကျပါ အတိုငျး ခပြေပွောဆိုခဲ့ပါသညျ။
“… သညျမှာ ဆရာ ၊ ကြှနျတျောတို့က လူကွိုကျအောငျ လုပျနတောမဟုတျဘူး။ သညျလို မဟုတျ မဟတျ ကိုယျထငျရာတှေ လြှောကျလုပျနကွေမညျဆိုလြှငျ ကြှနျတျောတို့တိုငျးပွညျဟာ မကွာမီ ပကျြစီးပွိုကှဲပွီး ကြှနျသားပေါကျဖွဈသှားမှာဘဲ။
ကြှနျတျောတို့တိုငျးပွညျမှာ အလောငျးဘုရား လကျထကျကတညျးက မူဆလငျတှရှေိတယျ။ ဘရငျဂြီတှရှေိတယျ။ အစတုနျးက ရှိလာကွတဲ့ နတျကိုးကှယျတဲ့ တောငျးတနျးသားတှရှေိတယျ။ အဲသညျတောငျတနျးသားတှဟော အင်ျဂလိပျလကျအောကျတုနျးက တခြို့ ခရဈယာနျတှဖွေဈပွီး အရိုးစှဲ နကွေတာရှိတယျ။
သူတို့တဈတှဟော အားလုံးနိုငျငံသားတှပေဲ၊ တိုငျးပွညျကို ကြှနျတှငျးက လှတျအောငျ တိုကျထုတျကွ တုနျးက ကြှနျတျောတို့ခညျြးမဟုတျဘူး။ သူတို့တတှေ ပါကွတယျ။
ယခု ကြှနျတှငျးက လှတျမညျမကွံသေးဘူး သူတို့တှအေပျေါမှာ အနိုငျကငျြ့ပွီး ငါတို့လူမြားစုရဲ့ ဘာသာကို နိုငျငံတျောဘာသာဖွဈရမညျလို့လုပျလိုကျလြှငျ ကြှနျတျောတို့ဟာ ခှေးလောကျတောငျ သောကျသုံးမကတြဲ့အကောငျတှေ ဖွဈသှားကွမှာပေါ့ဆရာ။
တိုငျးပွညျကို တိုငျးပွညျရေးလို တှေးစမျးပါ။ ဘာသာရေးတှေ ဘာတှညောတှေ လုပျမနစေမျးပါနှငျ့။ ကြှနျတျောတို့ဟာ တိုငျးပွညျတဈခုလုံး စညျးလုံးကွဖို့လိုတယျ၊
… ယခုအခြိနျမှာလိုခငျြတာက ပွညျထောငျစုထဲမှာ ရှိနကွေတဲ့ လူမြိုးအားလုံး ဘာသာအားလုံး ဘယျတော့မှ မပွိုကှဲဘဲ ခှဲထှကျသှားမညျ့လူတှေ ပျေါမလာစဘေဲ နိုငျငံရေးစိတျဓာတျ တဈခုတညျး ရှိအောငျသှငျးပွီး စညျးလုံးဖို့လိုတယျ။ နိုငျငံတျောဘာသာကို ဗုဒ်ဓဘာသာလုပျခငျြရငျ ဗုဒ်ဓဘာသာနိုငျငံတျောလို့ ဆရာဘာသာ ဆရာကွညော၊ ကြှနျတျော မပါဘူး။”
Mandalay, Myanmar ·
အမြိုး ဘာသာ သာသနာတို့သညျ
ရောနှော ပွနျ့နှံ့လြှကျ ရှိလသေညျ။
အားထား ယုံကွညျမှု ရှိကွပွနျလသေညျ။
ဆိုဗီယကျ ရုရှားမှာမူကား လူမြိုးခငျြးတူ၏။
နှဈပရိစ်ဆဒေရှညျလြားစှာ တဈမြိုးတဈစားတညျးပငျ ဟု စိတျထားရှိသူတို့ကို တဈစုတညျးပေါငျး၍
အစဉျအလာ ဆန်ဒပျေါတှငျ ဝံသာနုရက်ခိတတရားသညျ တညျနပေေ၏။
ရငျးနှီးစှာ ဆကျသှယျမှုကွောငျ့ အတိုငျးအတိုငျးအပွညျပွညျတှငျ နိုငျငံခွားသားတို့သညျ
ဂြာမနျလူမြိုးတို့ ပကျြစီးရပုံကို မွငျကွရပွနျ၏။
ကြှနျုပျတို့၏ဝံသာနုစိတျကို အလှဲသုံးစားမပွုဘဲလြှကျ (ဝါ)
သဘောကွီးစှာ ဆောငျရှကျသငျ့ကွပသေညျ။ ။
၁၉၄၆ ခု၊ဇနျနဝါရီလ ၂၀ ရကျ
ရှတေိဂုံအလယျပစ်စယံ ညီလာခံ မှ
ဗိုလျခြုပျမိနျ့ခှနျးကို ကောကျနှုတျ ရေးသားသညျ။ ။
4 Responses to “Anti-Racist Policy of General Aung San”
December 3, 2013 at 10:16 am | Reply
Source: Bo Gyoke’s speeches. https://drkokogyi.wordpress.com/2011/10/16/1-burma-advanced-concept-of-general-aung-san/
December 4, 2014 at 6:28 am | Reply
ဤပါးစပ်မှ မပြောသော နှင့် မပြောတော့သော ကိစ္စ များ
၁ ဒုတိယ ပင်လုံ
၂ တောင်တန်း ပေါ်တို့မှ တိုက်ပွဲများ
၃ အရှေ့ အနောက်တို့မှ ဒုက္ခ သည်များ/စခန်းများ
ဖျက်စီးခံရခြင်း ဖယ်ရှားခံရခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော
၅ မိချောင်းကန် သမီးကလေးအစရှိ လယ်သိမ်း ယာသိမ်း
၆ လယ်တီ သိမ် သံဃာ နှင့် မြေသိမ်းခံများအရေး
၉ နိုင်ငံတော်၏ံယံဇာတ နှင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့အား
၁၀ ဘိန်း အထွက်တိုးလာပြီး နှိမ်နင်းမှု့နည်းပါးခြင်း၏
တချက်ခြင်း ဆက်ရေးလျင်ကုန်မည်မဟုတ်ပါ၍ comment
May 8, 2017 at 1:40 pm | Reply
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ (အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၏ ဘာသာရေးအမြင်)
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ (၀၆-၀၅-၂၀၁၁)
April 2, 2019 at 10:31 am | Reply
ယခုလက်ရှိ တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေကိုင်ထားတဲ့ ဘုန်ကြီးပုံတွေတွေ့ရတော့ များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးနုရဲ့ ငါးနှစ်ရာသီ ဗမာပြည်စာအုပ်ထဲက စာသားတချို့ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်….
“ကျွန်တော်မှားချင်လည်း မှားမည်။ ကျွန်တော်၏ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုမှာ အခြားမဟုတ်။ ဘုန်းကြီးအားကိုးနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်သူများမှာ အချောင်သမားများဖြစ်ကြသည် ဟူသော အချက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ကိုယ်တိုင်က အပင်ပန်းလည်း မခံနိုင်၊ အနစ်နာလည်း မခံနိုင်သဖြင့် ကိုယ်တော်များကို တစ်ပတ်ရိုက်ပြီး နိုင်ငံရေးထဲ ဆွဲသွင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်သည်။
ရဟန်းများသည် လူနှင့်မတူ။ သိက္ခာပုဒ်ပေါင်း အကျဉ်းအားဖြင့် ၂၂၇ပါး၊ အကျယ်အားဖြင့် ကုဋေ ကိုးထောင်ကျော်မျှ ထိန်းထားရသဖြင့် ရဟန်း၏ ဘ၀သည် အပ်ဖျားပေါ်တွင် မုန်ညင်းစေ့ တင်ထားရသလို အလွန်နူးညံ သိမ့်မွေ့လှသည်ဟု ဘုရားဟောရှိ၏။
ထိုသို့ နူးညံသိမ့်မွေ့သော ဘ၀ရှိသည့် ကိုယ်တော်များသည် အလွန်ကြမ်းတမ်းသည့် လောကီအလုပ်များတွင် အကြမ်းတမ်းဆုံးဟု ဆိုအပ်သည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းကို အဘယ်မှာလျင် လုပ်၍ဖြစ်နိုင်ပါအံနည်း။
ကိုယ့်ကျောင်း၊ ကိုယ့်သင်္ကန်းနှင့် လူသူအတွေ့မခံဘဲ နူးညံသိမ့်မွေ့စွာ ပရိယက် ပဋိပတ် လုပ်ငန်းများကိုသာ အားထုတ်နေသည့် ကိုယ်တော်များပင်လျှင် အာပတ် မကြာခဏသင့်၍ အာပတ်ဖြေရခြင်း၊ ဥပုဒ်ပြုရခြင်း ၀တ်စောင့်ရခြင်း အစရှိသော ဆေးကြောရသည့် လုပ်ငန်းများကို မကြာခဏ လုပ်ရသေးသည်။
လူအလုပ်ကို ၀င်၍လုပ်ကြသော ကိုယ်တော်များမှာမူကား အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိတော့အံနည်း။ ထိုကိုယ်တော်များကို နိုင်ငံရေးထဲဆွဲသွင်းသော လူများသည် ကုယ့်အပြစ် ဘယ်လောက်ကြီးသည်ကို မသိကြသဖြင့် သနားစရာပင် ဖြစ်တော့၏။” (ဦးနုရေး ငါးနှစ်ရာသီ ဗမာပြည်မှ)
လူတွေသတ်၊ မီးတွေရှို့နေတဲ့ ကိုယ်တော်တွေရော လူတွေသတ် မီးတွေရှို့ဖြစ်အောင် လှုံဆော်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော်တွေရော ဘယ်လို အာပတ်ဖြေမလဲ သိချင်မိတယ်။ အာပတ်ရော ဖြေလို့ ရပါ့မလား…..